China gbachiekwa, na-eitationomi ọla kọpa mkpọchi, igwe anaghị agba nchara mkpọchi, akwukwo mkpọchi, mgbochi ohi mkpọchi, paswọọdụ mkpọchi, akara mkpisiaka mkpọchi na ndị ọzọ na padlocks ụlọ ọrụ na-emepụta | Boda
Nhazi ọkwa nke padlocks
E nwere ọtụtụ iche na nkọwa nke padlocks. N'ozuzu, a na-ekpebi oke mkpọchi ahụ site na obosara nke mkpọchi ahụ, nzube nke mkpọchi ahụ site na ịdị elu nke mkpọchi mkpọchi ahụ, na usoro nke mkpọchi ahụ kpebisiri ike site na usoro mmeghe nke mkpọchi, dị ka kpọmkwem oghere, mmechi mmeghe, mmeghe dị elu na imeghe okpukpu abụọ. Ngwunye a na-ejikarị eme ihe na-ejikarị emeghe ma na-emeghe.
Nke ahụ bụ, mgbe etinyere igodo ahụ n'ime oghere igodo nke cylinder mkpọchi ahụ, enwere ike ịdọrọ mkpọchi elu na-enweghị ntụgharị, nke a na-akpọ "mkpọghe elu". Kinddị mkpọchi a dabara adaba maka ijide ụmụ aka ma ọ bụ iburu ndị ghe oghe bụ ndị na-ekwesighi ịdebe isiokwu. Ihe akpọrọ “padlock abụọ” pụtara mkpọchi enwere ike imeghe naanị mgbe mkpịsị ugodi abụọ na-arụ ọrụ. O nwere arụmọrụ nche siri ike ma dabara adaba maka oge achọrọ ka mmadụ abụọ debe mkpọchi ahụ ma mmadụ abụọ nọ iji mepee mkpọchi ahụ n'otu oge, dịka ụlọ nkwakọba ihe na akụ.
Na mgbakwunye na nhazi ọkwa nke padlocks dịka ọnọdụ mmeghe (oghere mmeghe, mmeghe mmeghe, oghere elu, mmeghe abụọ), anyị nwekwara ike ịkọwa ha dịka nhazi nke padlocks. Typesdị ndị a dị iche iche dị ka ndị a: marble structure padlocks
Otu okwu igodo mkpọchi
Kinddị mkpọchi a na-eji mmiri cylindrical setịpụ ihe mgbochi na mkpọchi mkpọchi ahụ, nke mere na mkpọchi mkpọchi ahụ enweghị ike ịtụgharị wee nweta ọrụ nke mkpọchi. Mgbo Ọdịdị bụkwa otu n'ime ndị akacha eji mkpọchi. Oghere mkpọchi nke ụdị mkpọchi mechiri site na mpempe ígwè, nke na-enye ndị mmadụ mmetụta nke oke na nke siri ike. Ọ na-akpọ "puku oyi akwa mkpọchi". Agbanyeghị, ngwungwu ya dị na ya billiardard, yabụ ọ bụ nke otu mgbochi mkpuchi padlock. Lockdị mkpọchi a na-eji igwe mpempe akwụkwọ nwere ụdị dị iche iche igbochi na mkpọchi. Kinddị ihe owuwu a na-ejikarị ya na zinc alloy ma ọ bụ ihe mkpuchi ya.
Magnetik Ọdịdị gbachiekwa:
Dị ka ụkpụrụ nke magnetik repulsion, a magnetik mkpọchi sịlịnda usoro nakweere. A osisi magnetik nkebi osisi mbadamba na otu magnetik efere dị ka isi arụnyere n'etiti mkpọchi isi uzo na nchekwa pin. Igodo ahụ anaghị akpọtụrụ onye na-ahụ maka nchekwa. Mgbe etinyere igodo magnet na-enweghị nke ọma n'ime oghere mkpọchi mkpọchi ahụ, igodo ahụ na-emetụ efere nkepe igwe ahụ ma na-ewepụta ike na-asọ oyi, nke na-eme ka mkpọchi ahụ meghee. Na mgbakwunye, a na-ejikwa ụkpụrụ nke magnetik adọta efere ọla ahụ nke ọma ma mepee mkpọchi site na mmiri.
Mkpọchi bụ: anaghị agba nchara gbachiekwa, ọla kọpa gbachiekwa, Du-plated ígwè gbachiekwa, isi awọ ígwè gbachiekwa, na-eitationomi ọla kọpa gbachiekwa, zinc alloy gbachiekwa, ndụdụ mkpọchi, yinye mkpọchi
1. Igwe anaghị agba nchara gbachiekwa: a ụdị gbachiekwa ji mara ike ọxịdashọn na-eguzogide na adabara n'èzí ojiji. Agbanyeghị, n'ihi nsogbu nke nhazi na oke ọnụ, a naghị eji ya na China.
2. Ọla kọpa: ihe dị mkpa nke mkpọchi bụ ọla kọpa, na nke a na-ejikarị eme ihe bụ obere mkpọchi ọla kọpa, nke na-erughị 40mm n'ogo, tumadi n'ihi na ọla kọpa ahụ dịtụ elu.
3. Iron Padlocks: nnọọ nkịtị.
B. Grey iron padlock: a na-eji akwa isi awọ emeso elu ahụ, mgbe ahụ, ọtụtụ padlocks mara mma na-apụta, ha niile bụ ndị a
C. mitomi ọla kọpa gbachiri: ọ bụ electroplated ígwè gbachiekwa, nke na-ezo aka ọla kọpa plating n'elu
4. Zinc alloy gbachiekwa: a ụdị gbachiekwa na-akpụzi site na-anwụ mgbatị igwe na elu kpọmkwem.
3 、 Site na udi
1. ndụdụ mkpọchi
2. Chain mkpọchi
3. U-ụdị mkpọchi
BOSENDA na-ebugharị ọtụtụ mkpọchi, ihe mgbochi anyị zigara mba ndịda South East Asia, South America, Europe, East EU mba na Middle East. Maka ozi ndị ọzọ, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: Rainkwanyere mmiri ozuzo prrof ákwà, Pee mmiri ozuzo ákwà ákwà, ụgbọala mkpuchi
Osote: Chain, eweli yinye, galvanized yinye, igwe anaghị agba nchara yinye, dị iche iche nkọwa
Mkpọchi ọla kọpa
Mkpọchi Usoro Mkpọchi
Igwe anaghị agba nchara mkpọchi